Vehivavy sy Miralenta · Desambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy sy Miralenta · Desambra, 2017
Tantara mikasika ny Vehivavy sy Miralenta tamin'ny Desambra, 2017
Maraoka: Ahoana Ny Fomba Hanehoana Tsara Kokoa Ny Firenenao
Manoloana ny fitomboan'ny lazan'ny blaogy mahatonga ny adihevitra momba ny fomba hanehoana ny firenenao. Maro ami'ireo bilaogy amin'ny fiteny Anglisy any Maraoka no nosoratan'ny vahiny, izay miantso ny firenena ho tranony. Ny hafa kosa nosoratan'ny Maraokana, izay maro amin'izy ireo no monina any ivelany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Desambra 2017
Maraoka: Fiteny, Lahatsary Mozika, ary ny Fikarakarana “Hymen”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Desambra 2017
Niresaka lohahevitra samihafa ny tontolon'ny bilaogy Maraokana, tahaka ny fanamboarana indray ny hymen, ny lahatsary mozika Arabo.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Desambra 2017
Afganistana04 Desambra 2017
"Taona maro lasa izay, voafetra ho anatin'ireo rindrina efatra ny fiainan'ireo vehivavy tao an-tanànan'i Hazara, saingy tapitra izany manomboka izao."